Ubushushu Buni Ubungakanani Bokulala?
Ubushushu begumbi liluhlu lwamaqondo okushisa okubonisa ukuhlala ngokukhululekile kubantu. Kuloluhlu lweqondo lokushisa, umntu akashushu okanye ubanda xa ebeka iimpahla eziqhelekileyo. Inkcazo yeqondo lokushisa lihlukile kwizesayensi kunye nobunjineli xa kuthelekiswa nokulawulwa kwemozulu. Ukulawulwa kwemozulu, uluhlu luhluke ngokuxhomekeka nokuba luhlobo okanye ubusika.
Kwizenzululwazi, i-300 K ingasetyenziselwa njengamaqondo okushisa ekamelweni ukwenzela ukubala ngokulula xa usebenzisa ubushushu obupheleleyo . Ezinye izinto eziqhelekileyo ziyi 298 K (25 ° C okanye 77 ° F) kunye ne-293 K (20 ° C okanye 68 ° F).
Ukulawulwa kwemozulu, udidi lokushisa kwegumbi lwakhona ukusuka kwi-15 ° C (59 ° F) kunye ne-25 ° C (77 ° F). Abantu bavame ukwamukela iqondo lokushisa elingaphantsi kwelinye ehlobo nasexabiso elisezantsi ebusika, ngokusekelwe kwisambatho ababeza kugqoka ngaphandle.
Ukushisa kweCumbi kunye nokushisa okuMandla
Iqondo lokushisa elibi libhekisela kumashishini okusingqongileyo. Oku kunokwenzeka okanye akufanele kube yindawo yokushisa yegumbi lokunethezeka.
I-Labile Complex Inkcazo
Iifilimu ezili-15 ezigqwesileyo ze-Movies
Abakwa-Columbia College Admissions
Izinto ezili-10 zokuziwa Ngaphambi kokuya kwiMisa yaseLatin yaseMveli
Kutheni iibhetri zikhutshwa ngokukhawuleza kwiCold Weather
Phezulu 'Ii-80 zeengoma ze-Fixx
I-Glucose iMolcular Formula
Iziphumo ezili-10 eziPhambili kwiMbali yaBantu beMandulo